MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa ku wajahan dalka Qadar, xilli xiisad siyaasadeed ay wali ka taagan tahay wadamada Khaliijka.
Wafdiga Farmaajo oo ay ku wehliyaan Lix Wasiir, Xildhibaanno iyo Ganacsato badan ayaa la filayaa inay u ambabaxaan dalka Qadar horaanta Todobaadka soo socda, sida ay Warsidaha Garowe Online u xaqiijiyeen Illo ku dhaw Madaxtooyadda Villa Soomaaliya.
Booqashada Madaxweynaha ee Qadar oo mudo maalmo ah qaadan doonto, ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka uu gareey meel hoose, wixii ka dambeeyay heshiiskii DP World la gashay Somaliland.
Dowladda Qatar ayaa dhowaan la saxiixatay dowladda Federaalka Soomaaliya mashaariicyo horumarineed oo ku baxaya $200 oo Milyan oo Doollar, kaasoo ka mid ah dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar iyo sidoo kale Muqdisho iyo Afgooye.
Waa Booqashadii labaad oo Madaxweyne Farmaajo ku tago Qadar tan iyo sanadkii tagey, iyadoo booqashadii tan ka horeysay ay ahayd bishii May, 2017, kadib markii uu martiqaad ka helay Amiirka dalkaas Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani.
War Saxaafaded 14.05.2018. 00:21
Safarka Farmaajo ayaa timid xilli maamul goboleedyada dalka qaar ay ku eedeeyeen...
Farmaajo oo qaabiley Safiirka cusub ee Qadar [DAAWO]
Soomaliya 21.04.2018. 18:26
Sheekh Shariif oo ka hadlay Khilaafka Soomaaliya iyo Imaaraadka
Soomaliya 17.04.2018. 12:57
Villa Somalia oo war kasoo saartey safarka Farmaajo ee Qadar
War Saxaafaded 26.02.2019. 13:52
Farmaajo oo Wadahadal la yeeshay Amiirka Qadar
Soomaliya 26.11.2018. 12:34
Farmaajo oo u ambabaxay Qadar iyo fahfaahin ku saabsan safarkiisa
Soomaliya 26.02.2019. 12:15
Farmaajo oo daah furay wajigii 2-aad ee Manhajka Dugsiyada Dalka 14.12.2019. 13:57
Khayre oo Qatar uga qayb galay furitaanka Madasha Dooxa 14.12.2019. 12:03
Somaliland oo maxkamad soo taageysa shaqaale ajaaniib ah 14.12.2019. 11:43
Puntland iyo Itoobiya oo kawada hadlay iskaashiga amniga iyo ganacsiga 14.12.2019. 08:02
Axmed Madoobe, Shariif Xasan iyo Sheekh Shariif oo kulmay 14.12.2019. 07:49
Caqabadaha DF ka hortaagan in ay dib u soo celiso Somali Airlines 13.12.2019. 16:12